Frmaajo iyo Fahad Yaasiin waa musiibo – Nabaddoon Xaad | KEYDMEDIA ONLINE
Nabaddoon Maxamed Xasan Xaad, ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay meel uga soo wada jeestaan kooxda Farmaajo hoggaamiyo ee dalka musiibada ku ah.
MUQDISHO, Soomaaliya - Guddoomiyaha Golaha dhaqanka beelaha Hawiye, Maxamed Xasan Xaad, oo shir jaraa’id ku qabtay Magaalada Muqdisho, ayaa sheegay in Farmaajo iyo kooxdiisa ay yihiin caqabadda hadda ugu weyn ee hor taagan Dowladnimada Soomaaliya.
Nabaddood Xaad, wuxuu kooxdaan ku eedeeyay khaarijinta muwaadiniin Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan, kuwaas oo ay ugu danbeysay Ikraan Tahliil Faarax, oo 26-kii bishii hore ay afduubteen taliska NISA.
Wuxuu xusay in Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ay yihiin musiibo dadka iyo dalka loo soo diray, isla-maakaana wuxuu tilmaamay in ay ka halis badan yihiin Kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab.
Wuxuu dhallinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay ku baraarugaan, kooxda Dowladnimo la dirirka ah ee Madaxtooyada ku jirta, isla-markaana loo kaco in la isa qabto, ka hor inta aysan dhamayn wax garadka bulshada.
Nabaddoon Xaad, wuxuu iclaamiyay bannaan-bax nabadeed oo lagu raaddinayo xuquuqqda Ikraan Tahliil, iyo dhallinyarada kale ee muddo raqdooda iyo ruuxooda la raadinayo.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayuu ugu baaqay tallaabadii uu ka qaaday Cabdullahi Kullane, oo ka mid ah musiibooyinkii dalka ku habsaday afartii sano ee la soo dhaafay.
“Ra’iisul Wasaare, wali culeyskii waa halkiisii, taliyaha Nabad-sugidda ninka isku sheega waa musiibo, Farmaajo, dalka, doorashooyinka iyo dowladnimadaba wuxuu ku yahay musiibo labadaas inta ay meesha joogaan nabad iyo dowladnimo rajo lagama qabo”. Ayuu yiri Nabadduun Maxamed Xasan Xaad.